Ezekieri 42 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
42 Akazoenda neni+ kuchivanze chokunze nenzira yokuchamhembe.+ Akaenda neni kumudhadhadha wedzimba dzokudyira+ waiva pakatarisana nenzvimbo yakatsaurwa+ yakanga yakatarisana nechivako chaiva kuchamhembe.
2 Pamberi porutivi rwakareba makubhiti zana paiva nesuo rokuchamhembe, uye rakanga rakafara makubhiti makumi mashanu.
3 Pakatarisana norutivi rwechivanze chomukati rwakareba makubhiti makumi maviri+ nepakatarisana nenzvimbo yakarongwa matombo+ yechivanze chokunze paiva nevharanda+ rakanga rakatarisana nerimwe vharanda, paine nhurikidzwa nhatu.
4 Pamberi pedzimba dzokudyira paiva nenzira yakafara makubhiti gumi kupinda mukati,+ nzira yekubhiti rimwe chete, uye masuo adzo aiva kuchamhembe.
5 Zvino dzimba dzokudyira dzepamusorosoro dzechivako chacho dzaiva pfupi kupfuura dzouriri hwepasi nedzouriri hwepakati, nokuti dzaitorerwa imwe nzvimbo nemavharanda.
6 Nokuti dzakanga dziine nhurikidzwa nhatu,+ uye dzakanga dzisina mbiru dzakafanana nembiru dzezvivanze. Ndokusaka nzvimbo yakakura yakatorwa kupfuura yedzouriri hwepasi neyedzouriri hwepakati kubvira pasi.
7 Rusvingo rwematombo rwaiva kunze rwakanga ruri pedyo nedzimba dzokudyira dzaiva nechokuchivanze chokunze pamberi pedzimwe dzimba dzokudyira. Rwakanga rwakareba makubhiti makumi mashanu.
8 Nokuti dzimba dzokudyira dzaiva nechokuchivanze chokunze dzaiva dzakareba makubhiti makumi mashanu, uye tarira! pamberi petemberi paisvika makubhiti zana.
9 Pasi pedzimba dzokudyira idzi paiva nepokupinda napo paiva kumabvazuva, kana munhu achipinda madziri achibva kuchivanze chokunze.
10 Nechomukati, kurutivi rwakafara rworusvingo rwematombo rwechivanze rwokumabvazuva, tisati tasvika panzvimbo yakatsaurwa+ uye tisati tasvika pachivako chacho, maiva nedzimba dzokudyira.+
11 Pamberi padzo paiva nenzira yakafanana neyokudzimba dzokudyira dzaiva nechokuchamhembe,+ kureba kwadzo kwakanga kwakafanana uye kufara kwadzo kwakanga kwakafanana; pokubuda napo padzo pose pakanga pakafanana, purani dzadzo dzakanga dzakafanana uye masuo adzo akanga akafanana.
12 Zvakanga zvakaita masuo edzimba dzokudyira dzaiva nechokumaodzanyemba ndizvo zvakanga zvakaitawo suo raiva panotangira nzira, iyo nzira yaiva pamberi porusvingo rwematombo rwakafanana rwaiva nechokumabvazuva, kana munhu achipinda maari.+
13 Zvino iye akati kwandiri: “Dzimba dzokudyira dzokuchamhembe nedzimba dzokudyira dzokumaodzanyemba dziri pamberi penzvimbo yakatsaurwa,+ ndidzo dzimba dzokudyira tsvene, dzinodyirwa zvinhu zvitsvenetsvene+ nevapristi vanoswedera+ kuna Jehovha. Vanoisa zvinhu zvitsvenetsvene imomo nechinopiwa chezviyo nechinopiwa chechivi nechinopiwa chemhosva, nokuti nzvimbo yacho itsvene.+
14 Kana vapristi vacho vachinge vapinda, havazobudi munzvimbo tsvene vachienda kuchivanze chokunze, asi vachaisa nguo dzavo dzavanogara vachishumira nadzo imomo,+ nokuti idzo zvinhu zvitsvene. Vachapfeka dzimwe nguo,+ voswedera kuzvinhu zvine chokuita nevanhu.”
15 Zvino akapedza kuyera imba yomukati, akandibudisa kunze nenzira yokugedhi rakanga rakatarira nechokumabvazuva,+ akaiyera kumativi ose.
16 Akayera rutivi rwokumabvazuva netsanga yokuyeresa. Rwakaita tsanga mazana mashanu kupoterera yose, achishandisa tsanga yokuyeresa.+
17 Akayera rutivi rwokuchamhembe, rukaita tsanga mazana mashanu kumativi ose, achishandisa tsanga yokuyeresa.
18 Akayera rutivi rwokumaodzanyemba, rukaita tsanga mazana mashanu, achishandisa tsanga yokuyeresa.
19 Akapota kurutivi rwokumavirira. Akayera tsanga mazana mashanu, achishandisa tsanga yokuyeresa.
20 Akayera mativi ayo mana. Yaiva norusvingo kupoterera,+ rwakanga rwakareba tsanga mazana mashanu uye rwakafara tsanga mazana mashanu,+ kuti ruparadzanise chinhu chitsvene nechakasviba.+